Hlala kwikhaya ukuya kwi-100 yr izithethe zakudala @Chettinad
Indawo yokuhlala ebhiyozelwayo nangona yayikhe yayikho, namhlanje iyimyuziyam yokwenyani, egcine phantse yonke into yobuntu bayo bokuqala kunye nezinto zangaphakathi ukusuka kwixesha eyayakhiwe phantse kwinkulungwane eyadlulayo. Amagumbi makhulu anesilingi eziphakamileyo, imigangatho emenyezelayo neefestile neengcango ezipolishiwe.
Ifenitshala lixesha ngokwesitayile, yenziwe ngokugqibeleleyo kwaye yenziwe ngeyona teak yaseBurma igqwesileyo. Imigangatho kunye neendonga zifakwe kwiithayile ezidumileyo ze-Aathangudy ezenziwe ngesandla ukuza kuthi ga namhlanje.
Le Mansion yayiyindlu entle uKVAL Ramanathan Chettiar ayakhele intombi yakhe enkulu, uVisalakshi, eChettinad ngaphezulu kwenkulungwane eyadlulayo. Nangona kunjalo, ayizange ibe likhaya losapho eliphithizelayo ekucetywe ukuba libe yiyo kwaye yayisetyenziselwa iindibano zosapho ngamaxesha athile ngexesha elilandela ukwakhiwa kwayo.
Kwisiqingatha senkulungwane kamva yadlulela kuthi izisa ilifa elingenakulinganiswa nanto kunye nocelomngeni lobugcisa olukumgangatho ophezulu. Sasiza kuwubuyisela njani lo mfanekiso ubalaseleyo ngoxa sihlala sithembekile kwingqalelo yawo yantlandlolo? Yayingumsebenzi esiye sadibana nawo ngenkuthalo kunye nokuzingca, sikhetha zombini izixhobo kunye nabantu abasondela ekubuyiselweni ngononophelo olukhulu kunye nobuchule njengoko ubuya kwenza umsebenzi wobugcisa. Akukho lutshintsho lwenziweyo kumbindi wesakhiwo ngaphandle kokwahlulahlula iiholo zaso ezinkulu zibe ngamagumbi afanelekileyo eendwendwe apho sifumana khona ubukho obucacileyo bexesha elidlulileyo. Namhlanje kule Mansion, enye yeepropathi zethu zelifa elibalulekileyo, unganikela ubungqina kwi-ambiance esakhupha umoya wamaxesha eyakhiwe kuwo. Isipho sikatata kwintombi yakhe yokuqala!
Le Chettiar Mansion ikhumbula indlela yokuphila eyayingaqhelekanga ngokwenene. Abahlali baseChettiar kulo mmandla babengabarhwebi abaphumelelayo nabathanda ubomi obulungileyo. Izindlu zabo zamabhotwe zazimi bubungqina bobuhle obuphezulu ekukhawulweni kwayo kunye neenkcukacha zayo.
Ifenitshala lixesha ngokwesitayile, yenziwe ngokugqibeleleyo kwaye yenziwe ngeyona teak yaseBurma igqwesileyo. Imigangatho kunye neendonga zifakwe kwiithayile ezidumileyo ze-Aathangudy ezenziwe ngesandla ukuza kuthi ga namhlanje. Ukuzalisekisa lo moya wakudala wendlu, songeze isimbo senkonzo esisekelwe kwisithethe kunye nenkcubeko yalo mmandla, senzela amava eholide amangalisayo njengoko iyindawo yendawo.
Cinga ngeChettinad cuisine kwaye unokucinga ngendawo yokudlala yeziqholo. Yiyo yonke le nto nangaphezulu. Ngelixa ithandwa eIndiya, isentsha kwinkalakahla zangaphandle. Umlingiswa wayo okhethekileyo sisiphumo sokudityaniswa kobuchule obudibanisa ngokucokisekileyo iziqholo zase-Asia-mpuma, njengenkanyezi ye-anise, kunye nezinye izithako zaseIndiya ezikutsalela kwi-sensory domain iyonke. Ukuba ungumntu othanda ukutya ukhangela i-gastronomic adventures entsha ke siya kuba nentabalala yokuba ukungcamle kwaye uyikhumbule ixesha elide elizayo. Kwaye ukuba unikwe ubugcisa obuchanekileyo kodwa obonwabisayo bokupheka, thatha inxaxheba kwiiseshini zethu zasekhitshini ezisebenzisanayo ngexesha lokuhlala kwakho nathi kwaye ufunde iimfihlo ezintle ezilele ngasemva koku kukutya kukodwa kwamazantsi eIndiya.
Ukuhamba malunga nezitrato ezimxinwa zaseKanadukathan - enye yeelali ze-9 zoluntu oludumileyo lwaseChettiar kwezi ndawo - unokuxolelwa ngokuwa emva kwexesha elidlulileyo elisahamba phambili kwaye liphosa isithunzi sayo kubomi bemihla ngemihla babantu apha; apho iivillas ezinkulu, iibungalows ezinendlela yobukoloniyali kunye namanye amabhodlo amakhulu exesha elidluleyo ezama ukuchukumisa ababukeli ngomgangatho kunye nobungangamsha bawo. Indawo yokuthengisa iyanyakazela yimisebenzi engakhange itshintshe ixesha elide-imisebenzi yezandla, izacholo, imikrolo kunye nomsebenzi weplanga - zonke ezo zenza uqoqosho, intlalontle kunye nenkcubeko yeleitmotif yolu luntu lwabarhwebi luguqukayo kunye nobukrelekrele. Abathengi banokwenza izinto ezintle zokuthenga kunye neentengiso apha! Kwaye abo batsaleleke kwinkolo kwaye bafuna ukuhlola ingcwele kubomi baba bantu, iKanadukathan igcwele kwiitempile ezininzi ezaziwa ngembali yazo ekhethekileyo, ngokukodwa i-1800 yakudala itempile yasePallayiar Patti uhambo olufutshane.
Ubulula bengingqi yaseChettinad yinto oya kuthandeka ngayo, ngoko nangoko. Uyakubona umboniso ofanayo kwizindlu zamandulo zaseChettinad, ezinobungangamsha obulula njengophawu lwazo.
Kukho iinkalo ezininzi kummandla we-Chettinad. Njengaye, ishishini lamashishini akrelekrele eChettiars, ukutya okuneziqholo okwahlukileyo, iindlu ezinkulu ezimangalisayo zamandulo kunye neethayile zomgangatho weAthangudi zobugcisa.
Ezaziwa ngobukhazikhazi bazo bokwakha, malunga ne-11,000 lezindlu ezinkulu zase-Chettinad zisekhona - malunga nesiqingatha senani elalikho kwiminyaka eli-100 eyadlulayo.
Indlu nganye enkulu eChettinad imanziswe kukungaphelelwa lixesha. Kodwa ngelixa abanye babo beguga ngenxa yokungahoywa, abanye bazifumana bebuyiselwe njengeehotele zelifa ezamkela ihlabathi.
Iindlu ezinkulu ezidumileyo zakhiwa kwiminyaka engama-200 eyadlulayo ngabakwaChettiars. Uphawu lwemarble yaseItali, i-teak yaseBurma, ii-chandeliers, iisilingi ezihonjisiweyo ezenziwe ngamaplanga, iintsika zamatye, zonke ezidityanisiweyo kwimfezeko.
Iitempile ezingaphelelwa lixesha ezakhiwa kwiinkulungwane ezadlulayo ngemizobo entsonkothileyo yamatye kunye neegopuram eziphakamileyo zisajikeleza. Nanamhlanje, basabambelele kumasiko nezithethe zonqulo zakudala.
Ubugcisa kunye nobuchule bokuluka ngesandla bugcinwa buphila kwiilali zaseKanadukathan njengoko abaluki bobugcisa bejikeleza i-chakra ngendlela yokwenyani.
Ubugcisa bokuluka ngesandla busetyenziswa kwiilali zaseKaraidkudi, emva kokuba beem edluliselwe ukusuka kwesinye isizukulwana ukuya kwesinye. Kwakhona, iimbaleki ezilukwe kakuhle zebhedi kwindawo yethu, zisuka apha.
Ukuba ukhe wangcamla ukutya kweChettinad, uqinisekile ukuba uya kuyithanda. Buza ngemfihlelo yencasa yayo, kwaye uya kuva, "iimasala zayo ezisandul' ukugatywa ezineziqholo ezinevumba elimnandi!"
Abasebenzi bethu abaqeqeshwe kakuhle bahlala bekulungele ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho nathi.